musha nyika dzakabatana Politicians Joe Biden Zvekuchecheche Nyaya Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Biography yaJoe Biden inokuudza Chokwadi pamusoro peKudiki kwake Nhau, Hupenyu hwepakutanga, Mhuri, Vabereki, Mudzimai, Vana, Mararamiro, Net Kukosha uye Hupenyu Hwega.
Muchidimbu, tinoratidzira nhoroondo yeMutungamiri weAmerica wechi46. Inotanga kubva pamazuva ake ekutanga, kusvika paakazozivikanwa seyematongerwo enyika weAmerica. Kuti ndikupe iwe kuravira kweanobata chimiro chaJoe Biden 'Bio, heino pikicha yekufananidzira yehupenyu hwake.
Hupenyu nekusimuka kwaJoe Biden.
Ehe, munhu wese anoziva Biden mutungamiri mukuru wezvematongerwo enyika. Nekudaro, vashoma chete ndivo vakafunga kuverenga zvinyorwa zvakakwana zveJoe Biden's Hupenyu Hupenyu. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Joe Biden Nyaya Yevechidiki:
Joe Biden Zvekuchecheche Nyaya Plus Untold Biography Chokwadi. Mifananidzo kiredhiti: Delawareonline.
Joseph Robinette Biden (Jr) akazvarwa pazuva re20th raNovember 1942 kuna amai vake, Catherine Eugenia Biden nababa, Joseph Robinette Biden (Sr) kuSt. Mary's Hospital muScranton, Pennslyvania. Biden ndiye wekutanga pavana vana vakazvarwa mumubatanidzwa pakati pevabereki vake.
Mhuri yaJoe Biden panguva yaakaberekwa yakatambura kudzikisira kwakawanda kwemari. Kuti vagopa izvo zvakakosha zvezvidiki zveBiden, baba vake vaifanira kushingirira zvakanyanya kuti vawane raramo. Chokwadi ndechekuti, hudiki hwaJoe Biden hwakanga husina zvivakwa zvakawandisa sezvo mhuri yake yakanga isiri nzira padyo nehupfumi hwakakomba hwavaimbove nahwo asati aberekwa. Panguva iyoyo, vabereki vaJoe Biden havana kukwanisa kumutsidzira matsva maunganidzwa ematoyi kwaari.
Joe Biden Mhuri Yekumashure uye Kwayakabva:
Sezvatakataura, mhuri yaBiden yainakidzwa nehupfumi hwakawanda asati azvarwa. Biden akaberekerwa mumhuri yepakati-yemhuri kumashure, panguva iyo hupfumi hwemhuri yake hwainge hwaenda. Nekuda kwekunetseka kwavo kwemari, vamwe vemhuri dzaJoe Biden vakatamira kuzogara naambuya nasekuru vavo.
Mushure mekunetseka zvakanyanya mubhizimusi rake rekutengesa mota, baba vaBiden vakapedzisira vava mutengesi anobudirira wemota nokudaro vachichengetedza chimiro chepakati-chemari chemhuri yake.
Nezve Joe Biden Mhuri mabviro, iye ndudzi yeAmerican yedzinza reIreland, zvakare ine maGerman neEnglish mhuri yemhuri. Pakutanga, Joe akatama kubva pane imwe nzvimbo kuenda kune imwe sezvo mhuri yake yaitsvaga imba inodhura muDelaware, USA. Mushure mekuisa chisimbiso panzvimbo yake semutengesi akabudirira wekutengesa mota, Biden Sr. nemhuri yake pakupedzisira vakapinda mune imwe imba muWilmington, Delaware.
Joe Biden Kurarama Kwepakutanga:
Kukura paakaberekerwa muScranton (guta muPennsylvania), Biden aive nehupenyu hwakaomarara semwana wese munharaunda yake. Aiwanzopinda mukurwa nevezera rake uye dzimwe nguva anogona kuguma achichema kumba. Vabereki vaJoe Biden vari kupihwa mbiri yekumumutsa iye kuti ave akaoma, anoshanda nesimba uye anotsungirira kuburikidza nenguva dzinoyedza. Akataura kuti baba vake vanowanzo muudza;
"Champ, chiyero chemurume hachisi kuti anowisirwa pasi kangani, asi kuti anomuka nekukurumidza sei."
Pakutamisirwa nemhuri yake kuWilmington rinova iro iguta rakakura uye rine vanhu vazhinji muDelaware, Biden uyo aimbova mwana akaonda aigara achifara, mumwe munhu anowanzoonekwa achifara. Kuve nekuziva zvizere nezvemamiriro emhuri yake ekutanga emari, Biden aive akatsunga kukunda muhupenyu zvese muzita rekudzorera kubwinya kwemhuri yake kwakarasika.
Tisati takanganwa… Semwana, Biden akatambura nekugwinya uye akasekwa nevamwe vana vaimudaidza "Dash" uye "Joe Impedimenta". Iye mukomana mudiki anoshinga akakunda zvaakakanganisa nekudzokorora ndima refu dzenhetembo dzinosimudzira zvinonzwika pamberi pegirazi.
Joe Biden Dzidzo uye Basa Rokuvaka:
Biden akatanga kudzidza kwake paakanyoreswa kunodzidza kuSt.Paulmentary Elementary School muScranton. Akakurumidza kuendesa kunodzidza kuSt.Helena Chikoro kudzamara awana kugamuchirwa mune repamusoro Archmere Academy. Kuwana kugamuchirwa kudzidza kuArchemre Academy yaive, pasina kukahadzika, imwe yenguva dzinogutsa uye dzinofadza muhupenyu hwevechidiki Biden. Chokwadi chaive chekuti, kudzidza kuArchmere Academy kwaive kuri hupenyu hwake kwenguva refu shuwa.
Mufananidzo usingakanganwike weBiden (2nd kubva Kurudyi) kune yakakurumbira Archmere Academy. Mufananidzo wechikwereti: Delawareonline.
Paakatamba American Nhabvu:
Paaidzidza muArchmere, Biden akabatana nechikwata chenhabvu chechikoro uye akazova mutsigiri wepakati uye anogamuchira. Waizviziva here?… Hunhu hwake hwehutungamiriri hwakatanga kuratidzwa panguva yaakatungamira timu yake yechikoro iyo yakamborasikirwa nekushomeka kusingagumi kusvika mumwaka usina kurondedzerwa.
Ndiye pajezi kwete. 30 vakadzikama vachifunga nezano rekuti vakunde mumutambo wavo wenhabvu. Mufananidzo wechikwereti: Usatoday.
Kupindira Mune Chikoro Chematongerwo enyika:
Kunyangwe Biden aisawanzo kuverengerwa kuve chikamu chevadzidzi vane hungwaru uye vakangwara, zvakadaro, aura yake inorayira kuteerera nokudaro ichimuratidzira semutungamiri wepanyama pakati pevadzidzi. Mumazuva ake eJunior uye Senior High Chikoro, Biden akasarudzwa muhofisi yemutungamiri wekirasi kusvikira apedza chikoro chesekondari muna 1961.
Achibvuma chokwadi chekuti aive nani mukugadzirisa nyaya dzezvematongerwo enyika mushure mekutora chigaro chemutungamiri wenyika, Bhitenen akasarudza kuwana ruzivo rwakadzama nezvematongerwo enyika. Akanyoresa zvakare kudzidza nhoroondo uye zvezvematongerwo enyika sainzi kuYunivhesiti yeDelaware. Panguva ino, akave akatarisa zvishoma pane vadzidzi vake mumakore ake ekutanga eXNUMX kunyoresa kuyunivhesiti.
VERENGA Bharaki Obama Childhood Indaba pamwe Untold Biography Facts
Joe Biden Biography- Nzira yekuenda Mukurumbira:
Kupa nguva shoma kune vaaidzidza hakuna kumusundira panzira yekutsigira zvematongerwo enyika sezvo kufarira kwake zvematongerwo enyika kwakawedzera kuwedzera.
Munguva pfupi yakatevera, Biden akanyoresa kuti adzidze Law paSyakuse University Law School mushure mekupedza kudzidza kubva kuUniversity of Delaware. Aive pane mumwe wevadzidzi veMutemo akanakisisa nekuda kwekutsunga kwake kuti awedzere mamaira nekudzidza.
Kunyangwe pane izvo, rwendo rwekurumbira rwaisambova nyore nzira yeBiden. Akambokundikana kusvika chiyero chaidikanwa mukirasi chirevo chisina kukodzera cation kuchinyorwa chekudzokorora kwemutemo. Sezvaakadzidza kubva paudiki hwake, izvo zvinoita kunge zvakasarudzika zveBiden zvinogona kunge zviri zvimwe zvezvinyorwa zvakasimudzira kutsunga kwake kuti asambofa akakundikana mune ramangwana rinouya.
Joe Biden Biography- Simuka Mukurumbira:
Paakapedza chikoro paMutemo Chikoro muna1968, Biden akapinda mune zvematongerwo enyika akazara nhengo yeDemocratic Party iye achitevedza Law mune femu femu.
Muna 1970, Bilen akasarudzwa kuenda kuNew castle County Council uye nokudaro akatanga genesis yebasa rake rezvematongerwo enyika runyanzvi. Waizviziva here?… Biden akatanga kumiririra Seneti yeUnited States pazera ramakore makumi matatu nematanhatu. Paakazosvika makore makumi matatu, akave seneta wechitanhatu mudiki munhoroondo yeUS. Akashanda seSenator yeDelaware kwemakore makumi masere nemasere panguva yaakawana ruzivo rwakasiyana siyana kunyanya mune chikamu chehurongwa hwekune dzimwe nyika hweUS.
Seneta mudiki anonyemwerera kunyangwe mumamiriro akaomesesa, hunhu husingawanzo hunoratidzira chivimbo chake mukugadzirisa matambudziko. Mufananidzo wechikwereti: Joebiden.
Nekukurumidza kusvika kunguva yekunyora VaJoe Biden bio, aimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika akafungidzira nzvimbo dzinoverengeka dzinozivikanwa muUnited States of America.
Kusarudzwa semuchati-mutsigiri naBarrack Obama musarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica dza2008 izvo zvakaguma zvave kukunda mukufarira tikiti raObama-Biden ndiko kubudirira chaiko.
Mumiriri we47th weUnited States of America akagadzirisa uye akatarisisa mutemo weAmerican Kudzoserwa uye Reinvestment Mutemo uyo wakachengetedza hupfumi hweUS kubva mukudonha pasi pemhedzisiro yekuderera kwenyika. Kuita kwechigamba nevamwe kwakonzera mibairo yakati wandei, imwe yacho iri Mutungamiriri wePurezidhendi weRusununguko pamwe nekuparadzaniswa naBarrack Obama nemusi wa 12 Gunyana 2017.
Ona kuti mipiro yake yezvematongerwo enyika uye masevhisi akabhadhara sei! Barrack Obama anomupa mubairo weMutungamiri weMedal of Freedom muna 2017. Mufananidzo wechikwereti: Usatoday.
Senge panguva yekunyora, murume asingashandiswe moyo ave kuzivisa humbowo hwake hwekuda kumirira chigaro che2020 US Presidency mushure mekuedza maviri. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Nhangemutange yemutungamiri wenyika inoenderera !!! Biden akazivisa kukwikwidza kwake kukwikwidza Mutungamiri musarudzo dzemuAmerica 2020. Mufananidzo wechikwereti: Washingtontimes.
Joe Biden Mukadzi uye Vana:
Biden haana kungotsvaga hupenyu hunobudirira mune zvematongerwo enyika, asi akashandawo kuwana mukana wehukama hupenyu. Muna 1964 akasangana naNeilia Hunter waaishamwaridzana naye ndokutanga kufambidzana. Aimuda zvakanyanya uye aipedza nguva yakawanda naye achienda kuYunivhesiti imwechete - Syracuse University - naye.
Heino Bhiteni uye rudo rwake rwekutanga, Neilia Hunter. Anonyemwerera zvake zvisingaperi sechiratidzo cherudo rwavo rusingaperi. Mufananidzo wechikwereti: Superbhub.
Hukama hwaBiden naNeilia hwakaendeswa kune imwe nhanho nyowani sezvo shiri dzerudo dzakasunga banga pachechi yeKaturike muSkaneateles pazuva re27th yaAugust 1966.
Kurera mhuri inoshamisa chaive chinhu chikuru chemufaro kuna Biden sezvo muchato wake kuna Neilia wakabereka vana vatatu anoti; Joseph R. "Beau" Biden III, Robert Hunter, naNaomi Christina.
Mufaro wake wakarova pamusoro pevhu pasvondo pamberi peKisimusi mugore ra1972 apo mudzimai wake nevana vakapinda mutsaona yemotokari yakaipisisa. Dambudziko rinoparadza rakauraya mukadzi wake pamwe nemwanasikana wake ndokusiya nevanakomana vake vaviri vakakuvara zvakanyanya. Nhamo yacho yaive yakawandisa yekutsungirira uye zvakaita kuti Bilie afunge kuzviuraya. Akati;
“Ndakatanga kunzwisisa kuti kushupika kwaitungamira sei vanhu kuti vangowana mari chete; kuzviuraya kwaisangova sarudzo asi nzira ine musoro… ndakanzwa kuti Mwari vainge vandinyengera, uye ndakatsamwa. ”
Kutarisa kuguva remukadzi waBiden nemwanasikana (L) pamwe nevakomana vake vari muchipatara (R). Mifananidzo kiredhiti: Superbhub uye Usatoday.
Kupora kubva pane zvakaitika kwaari zvinoshungurudza:
Rufu rwemukadzi nemwanasikana wake rwakasiya mucherechedzo paBiden uyo aifanirwa kuzadzisa kudiwa kwevanakomana vake vaviri sababa vasina murume. Akazivisa kuti December 18 zuva risina-basa rake ega kuti akwanise kurangarira mukadzi wake nemwanasikana akafa.
Mushure memakore matatu ekurasikirwa nemukadzi wake, hupenyu hwerudo hwaBiden hwakaenderera mberi. Akasangana nemukadzi wake wechipiri, Jill Tracy Jacobs mu1975 ndokumuroora muna 1977.
Akawana rudo futi !! Biden achisumuka aine chivimbo padivi pemukadzi wake wechipiri, Jill Biden. Mufananidzo wechikwereti: Superbhub.
Jill naBiden vakasangana nezuva risingaone iro rakarongedzwa nemunun'una waBiden. Jill anonyatsodzidziswa, aine dhigirii reBachelor kubva kuYunivhesiti yeDelaware pamwe nemadhigirii maviri emasters kubva kuWest Chester University uye Villanova University zvichiteerana.
VERENGA Nancy Pelosi Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Joe Biden Mhuri Yechokwadi:
Biden amuka kune chinzvimbo chinoremekedzwa uye chakakosha muAmerica- zvese nekuda kwemhuri yake yakamira naye munguva dzematambudziko. Muchikamu chino, isu tinokuunzira zvimwe chokwadi nezvevabereki vaJoe Biden nevamwe vese vemhuri yake.
Nezve Amai vaJoe Biden:
Catherine Eugenia Finnegan ndiamai vaBiden. Amai vaBiden vaive nehanya nekupona kwake munyika umo mamiriro ezvinhu aive asingafungidzike uye akaoma. Kare kumashure, aigara achikurudzira Joe kuti arege kunzwa kufadzwa nevamwe vaiona zviri nani kupfuura iye. Biden anoyeuka kuti nguva imwe neimwe yaanouya kumba achishungurudzwa nemumwe wevana vakuru munharaunda, amai vake vakaoma-moyo vaimuudza;
"Ropa ropa mumhino dzavo kuti iwe ugone kufamba uchidzika nemugwagwa mangwana acho!"
Wow !!! Aigona kuramba akamira uye kutora zvishoma. Iwe ungabvumirana neni kuti amai vaBiden, Catherine Eugenia Finnegan anoshamisa kwazvo. Mufananidzo wechikwereti: Latimes.
Nezve baba vaJoe Biden:
Joseph Robinette Biden Sr ndibaba vaBiden. Biden Sr. akashanda zvakanyanya kuti ave nechokwadi chekurarama kwemhuri yake munguva yekushomeka kwepasi rose. Kutsiga kwake uye kutsunga kupa vana vake hupenyu huri nani yaive chidzidzo chikuru kuna Biden uyo akasarudza kuona kuti zvese zvaiitwa nababa vake hazvina kuitwa dongo. Kufananidzirwa pazasi ndibaba vaJoe Biden padivi pake.
Mufananidzo unokanda waJoe Biden nababa vake, Joseph Robinette Biden Sr. Mufananidzo wechikwereti: Democraticunderground.
Nezve vana vaJoe Biden:
Biden ane vakoma vaviri vadiki kureva; Francis W. Biden, James Brian Biden, uye hanzvadzi yechidiki, Valerie Biden. Francis aive mugadziri wezvivakwa muUS uye anga achitsigira zvikuru Biden panguva yeVice Presidential mushandirapamwe. Akange zvakare ashandisa zita rake rekupedzisira nekuda kwebhizinesi achidaidza zita rake rekupedzisira - Biden - chinhu chakakura kwazvo nekuda kwenhoroondo yemhuri yake yekuchengeta vanhu vanoda rubatsiro.
Vanun'una vaBiden; Francis W. Biden, James Brian Biden, naValerie Biden zvakateerana. mifananidzo yemakadhi: Dailymail, Abcnews, uye Harvard.
James Biden, kune rimwe divi, akatanga hutano hwaakatumidza kuti James Biden hutano hutano apo Valerie Biden ane chekuita nezvematongerwo enyika kuitira kutsigira hama yake. Biden nevanin'ina vake vakawana nzvimbo dzakakwirira dzekubudirira mumakore apfuura, chinova chiitiko chakango goneswa nekuda kwekushingirira kwavo mukuzadzisa hupenyu hwavaishuvira.
Nezve vanasekuru vaJoe Biden:
Achienderera mberi kumadzitateguru aBiden, sekuru vake baba vaJoseph Harry Biden mwanakomana waGeorge T. Biden naMary Emily Lidell. Ambuya vake baba vainzi Mary Elizabeth Robinette, mwanasikana waGeorge Hamilton Robinette naMary Ann Hanafee.
Vanasekuru vababa vaamai vaGeneral vaive Geraldine Catherine Blewitt, mwanasikana waEdward Francis Blewitt naMary Ellen Stanton naAmbrose Joseph Finnegan, mwanakomana waJames Finnegan naCatherine Roche.
Mufananidzo wekare unoratidza Joe Biden nevabereki vake uye vanasekuru naambuya. Mufananidzo wechikwereti: Ancestry.
Kuroora kwaBiden kuna Neilia Hunter kwakapa kuberekwa kwevana vatatu vakanaka, zvinoti; Joseph R. "Beau" Biden III (akazvarwa muna 1969), Robert Hunter (akazvarwa muna 1970), naNaomi Christina (akazvarwa muna 1971). Kuroorazve kwake kuna Jill Biden zvakare kwakapa kuberekwa kwemwana wake wechina; Ashley Biden.
Ashley akazvarwa mugore re1981 uye anokosheswa nevabereki vake pamwe nevakoma vake vakuru. Imwe nhamo yakarova Biden paakarasikirwa neumwe wevanakomana vake vapenyu - Beau - kumaoko anotonhora erufu musi wa30 Chivabvu 2015. Beau uyo ​​anga achirwisa kenza akapa mweya pazera ramakore makumi mana nematanhatu. Munguva yechiitiko chinotyisa, Biden akati:
"Beau Biden aive, zvakapusa, murume akanakisa chero ani zvake ati amboziva."
Vana vaJoe Biden; Beau Biden, Robert Hunter Biden, naAshley Biden (LR). Mufananidzo wechikwereti: Starschanges.
Waizviziva?… Pamberi pekufa kwaBeau, aive Delaware Gweta Guru pamwe nemutongi wemauto Advocate aishandira muIraq. Ainge arwazve nekenza yeuropi yakamuuraya makore maviri asati afa.
Nezve Hama dzaJoe Biden:
Kutanga kuenda, mukoma waBiden, James brian Biden akange azadza vana vatatu vakanaka. Vazukuru vake kuburikidza naJames Brian ndiJames Brian Biden Jr. naNicholas Coleman Biden nepo muzukuru wake achishandisa James ndiCaroline Nicole Biden.
Biden zvakare ane mwana wemukoma anonzi Cuffe Biden Owens uyo akavengwa nehama yake Valerie Biden. Uyezve, Bhiteni ine maina mana ayo; Caroline Nichole Biden, Catherine Eugene Owen, Valerie James Owen, naAlla Jaquet Biden.
Muzukuru waBidid anonyanya kuzivikanwa, James Brian Biden Jr. DJ. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti Biden haasati amboona muzukuru wake achiita mune chero chiitiko kunyangwe iye akasarudzika mune yevaraidzo nyika. Mune kumwe kurambidza vanhu kunzwa nezvekusaenda kwaBiden kubva kuzhinji wemuzukuru wake, James akadaro kuThe Times;
"Ane zvinhu zvakakosha zvekuita panguva ino pane kuuya kuzondiona ndichitamba izvozvi."
Sangana naBiden muzukuru anonyanya kuzivikanwa, James Brian Biden Jr. Mufananidzo wechikwereti: Abcnews.
Joe Biden Hupenyu hweMunhu:
Chii chinoita kuti Joe Biden abike?… Gara kumashure apo isu tichikupa iwe ruzivo nezve hupenyu hwega hweiye weU.S.Vice President kunze kwekuedza kwake kwezvematongerwo enyika. Kutanga, Joe Biden's persona musanganiswa weScorpio zodiac maitiro. Iye chaiye akagara nhaka uye airatidzira hunhu hwechiratidzo chake cheZodiac.
VERENGA Hillary Clinton Utano Nhau Plus Untold Biography Facts
Kutanga, Biden ane shungu, anoshingirira, anoronga, uye asingatyi mukutarisana nematambudziko. Zvakare kucherechedza, chikafu chinodikanwa naBiden pasita! Kunyangwe akaramba kuzivisa chikafu chake chaanoda kune vezvenhau, zvakazoonekwa kuti Biden agara achikumbira imwe menyu panguva yekutaura kwake.
Chikafu chaJoe Biden chaanoda ipasta. Mufananidzo wechikwereti: Anodya.
Zvido zvaBiden uye zvekuzvivaraidza zvakawandisa, zvisinei, iyo inonyanya kufunga-pfungwa pakati pezvaanofarira kushambira. Biden anoda kushandisa yakawanda yake yemahara nguva yekushambira.
Joe Biden Mararamiro:
Joe Biden akapfuura kubva muchikamu cheanodaidzwa kuti wepakati saruji kune kirasi yemamirioni. Akashanda zvisingaite kuvaka hupfumi hwake iyo pari zvino inofungidzirwa neForbes kuti iwane mambure anokosha mamirioni mazana mapfumbamwe panguva yekunyora.
Kuvaka chimiro chake chazvino hupfumi zvaisambove basa riri nyore sezvo Bhiten nemukadzi wake vakashanda nesimba kuti vawane mari inofungidzirwa kusvika pamamirioni gumi nemashanu pakati pemakumi mashanu negumi nesere kubva kumabhuku ehuku nekubhadhara matare ekutaura.
Joe Biden akachengeta ruzivo nezvekuunganidzwa kwemotokari yake pachivande, zvisinei, akave achikwenenzverwa kutyaira yake yepamusoro inotonhorera yakasvibira 1967 Chevrolet Corvette Stingray pane dzakawanda nguva. Yake Corvette Stingray yaive chipo chemuchato chakapihwa kwaari nababa vake.
Ona kuti anofamba sei neyakavanzika 1967 Chevrolet Corvette Stingray. Mufananidzo wechikwereti: Autoweek.
Bhiten zvakare ine imba yakasarudzika inokwana kuita mari inofungidzirwa inoita US $ 4.7 miriyoni muVirginia. Yakanga yakagadzirwa kuti itaridzike senge Mini-White House. Imba yacho ine dzimba dzekuvata shanu, pfumbamwe yekugeza, yekurovedza muviri, uye sauna yemukati.
Tarisa uone imba yaBiden, hazvisi zvinoyevedza. Mufananidzo wechikwereti: Guestofguest.
Joe Biden Chokwadi:
Tisati tazvidaidza kuti kuputira nyaya yaJoe Biden yehucheche uye biography, hezvino zvishoma-zvinozivikanwa kana zvisinga zivikanwe chokwadi nezvake.
Chokwadi # 1: Izvo zvaakaita kuti abhadhare Mari yake Yechikoro:
Biden aifanirwa kushanda semazuva ese mune imwe kuti atsigire mhuri yake mukupa mari yake yechikoro achidzidza pachikoro cheArchmere Academy. Akaita mabasa akati wandei akadai sekumera gadheni nekuwacha windows windows.
Chokwadi # 2: A Record Remake:
Unoziva here kuti Joe Biden aive wekutanga mutevedzeri weMutungamiri weUnited States of America kubva kuDelaware. Aivawo wekutanga Katolika wechikatorike kuwana chinzvimbo cheMutevedzeri weMutungamiriri weUS.
Chokwadi # 3: Chitendero:
Vabereki vaJoe Biden vakamurera muKristu uye anonamata Mwari muchechi yeRoman Catholic. Kutenda kwake kweRoma Katurike ndicho chimwe chezvikonzero zvikuru nei matsamba ake akatsamwira chikumbiro chake chemuchato kumukadzi wake mushakabvu. Nekudaro, Joe anotenda kuti kutenda kwake kunoumba chikamu chehunhu hwake uye haazombofa akarega kutenda kwake kune chero chinhu.
Waizviziva here?… Biden anotakura rombo-rombo rakanaka - rozari yake - kwese kwaanoenda. Iye anovimbisa kuti anowana rozari nyowani nguva yega yega paanokanganisa chero munhu waainayo.
Chokwadi # 4: Brain dzavanaChiremba:
Zvinetso muhupenyu hwemurume hazvife zvakasimudzwa kunyangwe abudirire zvakadii. Mugore ra1988, Biden akarwara nehuropi huviri aneurysms uye aida njodzi yekuvhiyiwa huropi kuti avarape. Chirwere chakamubvisa pakuzadzisa basa rake museneti kwemwedzi minomwe.
Kutenda nekuverenga nyaya yedu pana Joe Biden uye kutenda mune zvatiri uye zvatinoita. Vapepeti vedu paChidikiBiography vakatarisa kururamisa uye kurongeka pavanenge vachisimudza Biden's Bio uye nyaya yehudiki.
Ndokumbira kuti uise zvaunotaura kana kutibata nesu kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka pachinyorwa chino nezve aimbova Mutevedzeri weMutungamiri weUS
Zita rizere: Joseph Robinette Biden Jr.
Zita rekudanwa: "Joe".
Akazvarwa: Mbudzi 20, 1942 (makore makumi manomwe neshanu kuna Kurume 77)
Vabereki: Catherine Eugenia Finnegan (amai) naJoseph R. Biden Sr. (Baba).
Vanun'una: Valerie Biden (hanzvadzi), James Biden (mukoma) naFrank Biden (mukoma).
Mukadzi: Neilia Hunter (m 1966 - 1977) naJill Biden.
Vana: Hunter Biden (mwanakomana), Naome Biden (mwanasikana), Ashley Biden (mwanasikana) uye Beau Biden (mwanakomana 1969-2015).
Vanasekuru Vanababa: Joseph H. Biden naMary Elizabeth Robinette Biden.
Vanasekuru Vanasekuru: Geraldine C. Blewitt naAmbrose J. Finnegan.
Vazukuru: Natalie Biden (kuburikidza naBeau Biden), Robert Biden II (Via Beau Biden), Maisy Biden (kuburikidza naHunter Biden), Finnegan Biden (kuburikidza naHunter Biden) naNaomi Biden (kuburikidza naHunter Biden).
kukwirira: 1.83 metres = 6 tsoka.
Weight: 1.83 m.
dzidzo Yunivhesiti yeDelaware (BA)
Syracuse Yunivhesiti (JD).
Basa: Zvematongerwo enyika.
Networth: Mamirioni gumi (zviuru makumi maviri zvemakumi maviri).
Nancy Pelosi Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Munyori akapa zvinhu zvinonakidza. Nekudaro, iro basa remunyori rinogona kubatsirwa nekungwarira uye kwakadzama kudzidza uye kudzidzira kweakakosha akajairwa ekugadzira hunyanzvi.
Bharaki Obama Childhood Indaba pamwe Untold Biography Facts
Hillary Clinton Utano Nhau Plus Untold Biography Facts